Iindaba ezi-5 zikaNovemba. Abafazi abamnyama, iihlaya kunye namabali | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, into engeyonyani yebuchwepheshe, Iincwadi, Inoveli emnyama, Amabali
NgoNovemba. Olu lukhetho lwam Ezingu-5 zenoveli ezimnyama zenoveli emnyama, umzobo (okanye comic) kunye iindaba Amagama akhoyo ngoku esiqu sikaCarlos Ruiz Zafón, María Frisa, Frank Herbert, Juan Gómez-Jurado okanye Jo Nesbø.
1 Indlwane yesigcawu - uMaría Frisa
2 UKumkani omhlophe - uJuan Gómez-Jurado
3 Ilanga leGazi-Jo Nesbø
4 Isixeko somphunga - uCarlos Ruiz Zafón
5 Dune - uFrank Herbert
Indlwane yesigcawu - UMaria Frisa
A UMaria Frisa Ndibe nethamsanqa ku udliwano-ndlebe naye kwiminyaka embalwa edlulileyo kumsitho wokuphehlelelwa kwinoveli yakhe Ndikhathalele. Ngoku buya nesi sihloko sitsha. Iinkwenkwezi Katy, Umama ongaphangeliyo uhlala nentombi yakhe eMadrid kwindlu yodidi ekufuneka befudukele kuyo kwindlu encinci. Kungekudala uKaty ubizwa ukuba anikezele ngento ejongeka njenge umsebenzi wamaphupha kwaye ukubetha kwethamsanqa ebendikudinga. Kodwa eyenzekayo yile mpazamo Ukususela kwixesha elidlulileyo Phinda uvele kwaye ubangele eyona mphupha imbi kakhulu ungacinga.
Inkosi emhlophe -UJuan Gómez-Jurado
Isihloko esivala ifayile ye- trilogy Kudlala indima enkulu kutshanje, ngaphezulu sui generis kwaye ethandwayo amaqhawekazi yohlobo olumnyama, UAntonia scott. Ikwayenye yezona meko zokuhlela kwiminyaka yakutshanje. Kule Inkosi emhlophe sine umyalezo ongaqondakaliyo: «Ndiyathemba ukuba awulibalanga ngam. Masidlale?". Ngulowo ufunyanwa nguAntonia Scott, owazi kakuhle ukuba ngubani owuthumele kuye kwaye uyazi ukuba lo mdlalo phantse awunakuphumelela. Kodwa kuyabonakala ukuba akathandi kuphulukana, nangona inyani indibambile emva kokubaleka ixesha elide.
Ilanga legazi -UJo Nesbø
Ukuba kufuneka ndigcine nantoni na kulo nyaka uyintlekele, kukuba iinoveli ezimbini zikaJo Nesbø ziya kube zipapashiwe. Akungombuzo wokukhalaza, ukuba umbhali waseNorway usiqhelanise neminyaka emibini phakathi kwencwadi nencwadi. Kwaye ukuba akanankwenkwezi kuzo UHarry hole, bayayenza ngoku Amadoda aseNorway, njengoko babone kufanelekile ukuba babhaptize apha le saga iqale ngoMeyi nge Igazi kwikhephu.
Sele ndiyifundile kwakudala Ilanga legazi, isihloko esingenakuphikiswa sokuqala se Ilanga ezinzulwini zobusuku. Imalunga nenye inoveli emfutshane efundwa kanye kunye neenkwenkwezi UJon hansen, yindoda ehlaselayo eye yangcatsha Umlobi weentlanzi (esele ivele ngaphakathi Igazi kwikhephu), enye ye iintlanzi ezityebileyo ulwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo Oslo.
Ke ibeka umhlaba embindini kwaye akukho nto ingcono kunokuya kwiArctic Circle. Apho udibana khona lea, intombi yenkokeli yenkolo yelali encinci ye-puritanical kwaye unyana wakho, oza kugqiba ukusebenza naye ngaphezu kobuhlobo. Kodwa, ewe, i-El Pescador ayikahlali neengalo zakhe ziwelekile.
Isixeko somphunga - UCarlos Ruiz Zafon
Ngombhalo ongezantsi we Onke amabali, URuiz Zafón wawuthatha lo msebenzi njenge ukwamkelwa kwabafundi bakho abathembekileyo ukusuka kwi-saga yaqala nge Isithunzi somoya. Ngelishwa lo nyaka umbi kunye nomhlaza bathathe umbhali.
La mabali aneenkwenkwezi a mfana ugqibe kwelithini? umbhali ukufumanisa ukuba amabali awenzayo anceda ukukhulisa umdla wentombazana esisityebi awileyo nayo; a uyilo ebaleka uConstantinople ngezicwangciso zelayibrari engenakoyiswa; Umntu wasemzini mnumzana ezilingayo ingawenzi ukubhala incwadi eyodwa. Y UGaudi, othi, ngesikhephe esiya kwindibano engaqondakaliyo eNew York, azinikele ekonwabeleni ukukhanya kunye nomphunga, izinto ezifanele ukwenziwa zizixeko.
UBrian herbert, nyana nendlalifa ka UFrank Herbert, uye wahlengahlengisa intsomi yeklasi ebhalwe ngutata wakhe. Dune yapapashwa ngo-1965 kwaye yaba yimpumelelo engathethekiyo ngelo xesha, yaphumelela ibhaso elidumileyo likaHugo kunyaka olandelayo. Uyenza ecaleni kwe- UKevin J. Anderson kwaye iboniswa sisibini seValladolid illustrators: URaul Allén y UPatricia martin.
Uhlengahlengiso luya kupapashwa kwimiqulu emithathu kwaye ngoku eyokuqala iyeza, ekwangqinelana nenkulumbuso yolungelelwaniso lwefilimu ayaleleyo. UDennis Villeneuve.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Iindaba ezi-5 zikaNovemba. Abafazi abaNtsundu, iihlaya kunye namabali
Ndicebisa inoveli emnyama kunye namayelenqe. Indlela yeBlixen.
Ukulutha ngokupheleleyo. Awunakuyeka ukuyifunda. I-agile kwaye ihlakaniphile. Umbhali wayo uqhekekile